Lalao Twitch Prime Free - Desambra 2020 - Lalao
Twitch Prime dia an'i Amazon. Efa ela izay no naha mpikambana azy karama. Raha gamer ianao dia mila mahafantatra ny zava-misy fa misy lalao maimaim-poana isam-bolana ao amin'ny Twitch Prime.Twitch Prime dia manome ny mpampiasa maimaim-poana lalao hisintomana sy hitazona azy ireo isam-bolana.
Ny famandrihana Twitch Prime dia misy an Amazon Prime na koa Ny maha-mpikambana ny horonan-tsary voalohany . Noho izany, raha nisoratra anarana tamin'ny iray amin'ireo sehatra ireo ianao dia tsy mila mampifandray ny Amazono fotsiny sy ny kaonty Twitch mba hahazoana ireo lalao maimaimpoana.
Ny famandrihana Twitch Prime dia tsy vitan'ny hoe misafidy safidy, emotikon, fijerena dokambarotra manerana ny fantson'ny Twitch. Saingy, lalao maimaim-poana koa isam-bolana.
Lisitry ny lalao maimaimpoana Twitch Prime:
1. Kintana mirehitra
Ity iray ity dia lalao shooter miaraka amin'ny fahafinaretana an-tsambo. Io no tohin'ny Pulstar, izay ampidirina amin'ny lalao maimaim-poana amin'ity volana ity ihany koa.Amin'ity lalao ity dia mila misafidy fiaramanidina 6 misy hery samihafa ianao avy eo mila miditra amin'ny ady tsy misy farany izay hitranga eo anelanelan'ny planeta Remuria sy Mutras.
Mila milalao ny lalao ianao amin'ny alàlan'ny fitifirana ny fahavalonao amin'ny tifitra misaraka ary amin'ny alàlan'ny fakana herinaratra sy singa bonus.
2. Fahafatesana mahafaty manokana
Raha tianao ny lalao miady amin'ny Retro, dia azonay antoka fa ho tia ity lalao ity ianao.Fatal Fury Special dia manana endrika vazivazy ary fomba tokana mampatsiahy antsika ny Street Fighter.Miverina amin'ny taona 1993 ity lalao ity ary ao koa ireo endri-tsoratra valo avy amin'ny Fatal Fury 2.
Lavaka manokana fatal Fury manokana miady amin'ny mpiady 15 isan-karazany.Ity lalao ity dia tena mendrika ny fotoananao ary azo antoka fa ho tianao ny milalao ity lalao ity.
3. Max: Ny fanozonana ny firahalahiana
Max dia lalao famahana piozila hitazomana ny ati-dohanao hijerena azy.Ity lalao ity dia tototry ny hetsika ary koa ny famahana ny piozila mamorona.
Max dia mitazona Magic Marker, tsy maintsy miatrika ny ratsy rehetra izy amin'ny lafiny rehetra amin'ny tontolo hafa mba hamonjy ny rahalahiny, Felix.
4. Mpanjakan'ny mpiady 2002
Navoaka tamin'ny taona 2002 ity lalao ity. Miaraka amin'ny teknikan'ny Quick Evasion sy Max Activation izay vao maika nampientam-po ny ady.King Of Fighters 2002 lalao dia deraina erak'izao tontolo izao.
Ity lalao ity dia manana teknika mahavariana. Miaramila 15 no mametaka vy amin'ny fetiben'ny fetin'ny fifadian-kanina sy feno hatezerana. Azonao atao ny mampiasa tarehin-tsoratra vaovao sy ny fintsin'ny Fury hanenjehana sy hanendasana ny lalanao mankany amin'ny fandresena
Lalao maimaim-poana hafa:
Ireo mpanjifa Twitch Prime dia afaka mahazo lalao maimaim-poana isam-bolana. Ny lalao hafa dia:
Rainbow Enina fahirano
Tetika amin'ny adin'ny ekipa
Ilay Fahafito mahafaty
Ahoana ny fomba hitakiana kilalao maimaim-poana?
Lalao miaraka amin'ny Twitch Prime no safidin-tànana voafantina lalao maimaim-poana mahazo ianao isam-bolana. Ireo lalao ireo dia misy mandritra ny fotoana voafetra ihany. Noho izany, alao antoka fa hijerena indray isam-bolana ny lalao vaovao.Raha vao mitaky lalao ianao dia hampidirina ao amin'ny tranombokinao izany ary ho azonao izany raha mbola manana kaonty Amazon Prime ianao.Tsy mila mametraka lalao ianao raha tsy vonona ny hilalao azy.
Raha hitaky lalao maimaim-poana dia sokafy fotsiny ny browser-nao ary mankanesa ao amin'ny pejy Twitch Prime fandrobana. Mikorisa mankany amin'ny fizarana Lalao miaraka amin'ny Prime ary avy eo tsindrio ny Claim eo ambanin'ny lalao rehetra tianao ampidirina ao amin'ny tranombokinao.Vita eto ianao. Tadidio fa alohan'ny hilalaovanao lalao dia mila mampidina sy mametraka ny biraonao Twitch ianao na ny fampiharana Amazon Games.
Ny mpikambana Amazon Prime dia afaka mahazo lalao maimaim-poana. Raha mampiasa Twitch ianao dia afaka milalao lalao manokana tsy andoavam-bola isam-bolana. Afaka mahazo lalao maimaim-poana ianao ary afaka mahazo entana ao anaty lalao toy ny fonosana booster, hoditra, ary maro hafa isam-bolana.
Amin'ny maha-gamer anao dia azo antoka fa ho tianao ny Twitch Prime noho ny lalao maimaim-poana atolotry ny mpampiasa azy. Azonao atao ny mangataka fotsiny ny lalao maimaim-poana ary misintona azy avy eo isaky ny te-hilalao ny lalao ianao.
Ahoana ny fomba hanehoana isan-jato isan-jato amin'ny bateria amin'ny iPhone 12?
Ahoana ny fomba ahazoana karatra fanomezana Amazon maimaim-poana?
taplr vonoy ny fampiharana maody azo antoka
ny fomba hidirana netflix maimaimpoana
sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana tsy misy alaina
Ahoana ny fampiakarana ny ondrilahy amin'ny minecraft
chromecast ho an'ny Windows 10 misintona
stream maimaim-poana amin'ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet